शकुन्तला जोशी, Author at JINDAGANI.COM
Home » Archives for शकुन्तला जोशी
Author: शकुन्तला जोशी
अशोज ५, २०७८	0
जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय ! पैसा पो थिएन, पढ्ने इच्छा र क्षमता उनीसँग तिब्र थियो । उनको प्रतिभा र अवस्था देखेर ज्ञानोदय बालबाटिकाका फाउन्डर प्रिन्सिपल इन्द्र याक्थुङ्बाले ६ कक्षादेखि १० कक्षासम्म अध्ययन खर्चको व्यवस्था गरिदिए । त्यसपछि उनले पढाई खर्चकै लागि काम गर्नु परेन, ढुक्कले पढे, कक्षामा उनले दोस्रो स्थान टेक्नु परेन । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरे ।
साउन २४, २०७८	0
उनी नगरप्रमुख हुन्, यसभन्दा पहिले परिवारको जिम्मेवारी, पार्टीको जिम्मेवारी, समाजसेवाका अन्य क्षेत्रसँग पनि उनी अभिन्न रुपमा जोडिएकी छिन् । यी सारा जिम्मेवारी उनी चुस्त हिसाबले निर्वाह गर्ने दावी गर्छिन् । ‘कसरी गर्नुहुन्छ त समय विभाजन ?’ उनी हाँस्दै जवाफ दिन्छिन् – ‘समयको उचित बाँडफाँड । मैले कहिले पनि परिवारलाई दिने समय पार्टीलाई दिइनँ, पार्टीलाई दिने समय परिवारलाई बाँडिन । अहिले म नगरप्रमुख हुँ, जनताको समय काटेर व्यक्तिगत जीवनमा लगाउँदिन ।
साउन ८, २०७८	0
एक सादगी पिताको सम्झना
पिताको महानताको विषयमा त उनले पछि विभिन्न किताब र पत्रपत्रिकामा पढेर थाहा पाएका हुन् । अहिले पनि उनी ठूलोबुबा गंगालाल र बुबाको योगदान, महानताबारे अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई जति चिन्दै जान्छु, उहाँहरूप्रति मेरो प्रेम अगाध आस्थामा बदलिँदै जान्छ ।’
साउन ३, २०७८	0
एक प्रतिरोधी सर्वहाराको आवाज
‘सँगै घाँसदाउरा गरेको ती साथीहरू कति भेट्नु मन लाग्छ, कति माया लाग्छ । तिनेरले कति माया गथ्र्यो । सानिमाको रगडगमा आफू केही लाउनु पाउँदैनथ्यो । साथीहरू अपहत्ते गरेर खुवाउँथे । म भाग्थेँ ऊ परपरसम्म । तर, उनीहरू लखेट्दै आएर पनि खुवाउँथे, आफूले केही लान नपाएकोले मलाई लाज लाग्थ्यो ।’
साउन १, २०७८	1
चम्किँदैछ रातो तारा ?
चम्किलो रातो तारा पढेर क्रान्तिमा लागेका मान्छेहरू त वास्तवमा आमूल परिवर्तनकै लागि हिँडेका थिए । जो हिँडेका थिए, ठूलो सपना देखेरै लागेका हुन् । अहिले पनि सीमित नेताहरूले त्यो सपना सम्झिरहेकै होलान् । बाँकीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरे । तर फेरि पनि मुलुक–समाजलाई नै परिवर्तन गर्न भनेर देखेको सपना त अधुरै छ ।
असार १९, २०७८	1
जनता जगाउने किताबको अनुवाद
‘चम्किलो रातो तारा’ चिनियाँ लेखक लि शिन तियनको उपन्यास हो । कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि भएका धेरै नेपालीले पढेको किताब हो यो । तिनै लेखकको आज दोस्रो स्मृति दिवस । यस सन्दर्भमा कृतिको नेपालीमा अनुवाद गर्ने सीताराम तामाङ्गले उनका साथै अनुवादका सन्दर्भहरू सम्झिएका छन् ।
असार १३, २०७८	2
लङ बुटको सपना
उसले भन्यो- ‘तँ दुनियाँसँग सुत्छेस्, मसँग सुत्न के भो तँलाई ?’ त्यतिबेला उनी निकै बलियी थिइन् । ‘ए एउटी आइमाईको जीवन चैं सुत्ने नै मात्रै देखिस् ?’ यति भनेर उनले एक लात्ती हिर्काइन, परतिर लड्यो l फेरि उठेर आएर उनलाई अपशब्द बोल्दै समात्न आयो, उनले प्रतिवाद गरिन्, चिच्याइन् । सुनार आमाका परिवार आए, नजिकै रहेका सेना पनि आए । ती पुरुषलाई बेस्सरी पिटे र चौकीमा जिम्मा दिए ।
असार ९, २०७८	0
पारिजातः एक क्रोनिक दार्शनिक
एकदिन बाउले दिदीलाई भन्नुभो, ‘ठिकै भो यो डाक्टर नभा’को । यो अधबेस्रोले एकातिर भनेर अर्कातिर सुई घोचिदिन्थ्यो होला । नशा फुलिएको देखेर पिलो भनेर काट्नु पनि बेर छैन । यो क्रोनिक फिलोसफर…।’
असार ८, २०७८	0
हिजोका गीतमा साहित्यिक मूल्य हुन्थ्यो । जीवनसँगको मेल खोजिन्थ्यो र बिम्बमा अभिव्यक्त गरिन्थ्यो । तर अहिलेको धेरैजसो गीतका शब्द टुक्का मिलाएजस्ता लाग्छन् ।
आजको संगीत बिस्तारै साहित्यबाट टाढिँदै गएको देखिन्छ ।
असार ६, २०७८	0
हिँड्दा–हिँड्दै टक्क अडिएर सोनामलाई घरी आकाश घरी हिउँको संसार नियालिरहूँ जस्तो हुन्थ्यो । डोरीमा झुण्डिँदै उक्लिँदै गर्दा बेला–बेला पछाडि फर्केर हेर्थे सोनाम । जति उचाइमा पुग्यो, चन्द्रमा त उति नजिक आएजस्तो लाग्ने । उनलाई लाग्यो, ओहो ! सगरमाथा र चन्द्रमा त एउटै लाइन उभिएका छन् कि क्या हो ? कि चन्द्रमा अझै होचो छ शिखरभन्दा ?